चालक अनुमतिपत्र…घर बसीबसी लिन चाहनुहुन्छ… ? – Gorkhali Dainik
October 7, 2020 293
“एसएमएसबाट सेवाग्राहीले सेवाका लागि अपोइन्ट्मन्ट पाउने भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि अनावश्यक भिड हुन छाड्ने र सेवाग्राहीको समय बचत हुनेछ। कतिपय देशमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणजस्ता सेवा हुलाकमार्फत् नै दिने गरिन्छ,” यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने। सेवाग्राहीको घरमै लाइसेन्स पुर्‍याउने भनिएको होम डेलिभरीको कुरा पनि उपयुक्त कदम भएको उनी बताउँछन्। बीबीसी[
Prev´सिउँदोमा सिन्दुर लगाएको छैन नत गलामा पोते झुन्डाएको छु`…::एक बिबाहित महिला
Nextसाथीहरुलाई…..मेसीले आफ्नो डेढ अर्बको जेटमा…‘लिफ्ट’ दिदैँ….!